Iindaba -I-Covid: Ukukhutshwa kwesitofu sokugonya i-Oxford-AstraZeneca ukuqala
Covid: Ukukhutshwa kokugonya kweOxford-AstraZeneca ukuqala
Idosi zokuqala ze-Oxford-AstraZeneca coronavirus jab ziya kunikwa njengoko i-UK ikhawulezisa inkqubo yayo yokugonya ukujongana nokunyuka kwamatyala.
Idosi engaphezulu kwesiqingatha sesigidi sokugonya sikulungele ukusetyenziswa ngoMvulo.
Unobhala wezempilo uyichaze “njengomzuzu obalulekileyo” kumlo wase-UK wokulwa intsholongwane, njengoko izitofu zizokunceda ukuthintela usulelo kwaye, ekugqibeleni, zivumele ukuba kususwe imiqobo.
Kodwa iNkulumbuso ilumkise ukuba imithetho enzima yentsholongwane inokufuneka kwixesha elifutshane.
U-Boris Johnson uthe izithintelo zengingqi eNgilane “Mhlawumbi sele iza kuba nzima” njengoko i-UK isokola ukulawula into entsha, esasazeka ngokukhawuleza yintsholongwane.
NgeCawa ngaphezulu kwama-50 000 amatyala amatsha aqinisekisiweyo abhalwe e-UK kusuku lwesithandathu oluqhutywa, nto leyo ibangele ukuba abezomsebenzi babize ukuvalwa kwesithathu kwelizwe eNgilane.
enorthern Ireland kwaye IWales Okwangoku banendawo zabo zokutshixa endaweni, ngelixa abaphathiswa bekhabhathi yaseScotland bazakuhlangana ngoMvulo Ukujonga amanye amanyathelo.
Inkulumbuso ilindele 'amashumi ezigidi' jabs ngo-Epreli
Uya kulungela nini ugonyo lweCovid?
Inokuthetha ntoni amanyathelo 'anzima' eecoronavirus?
Izithembiso ezithandathu zesibhedlele- eOxford, eLondon, eSussex, eLancashire naseWarwickshire- ziya kuqala ukulawula i-Oxford-AstraZeneca jab ngoMvulo, ngeedosi ezingama-530,000 ezilungele ukusetyenziswa.
Uninzi lwezinye iidosi ezikhoyo ziya kuthunyelwa kumakhulu eenkonzo ezikhokelwa yi-GP kunye namakhaya ononophelo e-UK kamva evekini, ngokweSebe lezeMpilo kunye noKhathalelo lweNtlalo (i-DHSC).
Unobhala wezeMpilo uMatt Hancock uthe: “Eli lixesha elibalulekileyo kwidabi lethu lokulwa le ntsholongwane kwaye ndiyathemba ukuba inika ithemba elitsha kuwo wonke umntu ukuba ukuphela kwalo bhubhani kusemnyango.”
Kodwa ubongoze abantu ukuba baqhubeke nokulandela isikhokelo sokuqhawula kude ekuhlaleni kunye nemithetho ye-coronavirus "yokugcina iimeko phantsi kwaye sikhusele abantu esibathandayo".
Njengoko ukunyuka kwamatyala e-Covid kutsha nje kubeka uxinzelelo kwi-NHS, i-UK ikhawulezise ukukhutshwa kwayo kogonyo ngokucwangcisa ukunika amacandelo omabini okugonya ngaphandle kweeveki ezili-12, ekuqaleni icwangcise ukushiya iintsuku ezingama-21 phakathi kwejabs.
Amagosa aphezulu ezonyango e-UK akhusele ukulibaziseka kwiidosi zesibini, besithi ukufumana abantu abaninzi bagonywe ngejab yokuqala “kukhethwa kakhulu”.
Sukuyenza impazamo, i-UK ikugqatso oluchasene nexesha.
Oku kucace gca kwisigqibo sokulibazisa ithamo lesibini lokugonya ukugxila ekunikezeleni abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka iidosi zabo zokuqala.
Kukho ubungqina bokucebisa ukuba inokwenza isitofu sokugonya se-Oxford-AstraZeneca sisebenze ngakumbi, kodwa ayicacanga ncam kwiPfizer-BioNTech njengoko izilingo zingakhange zijonge ukusebenzisa isitofu ngale ndlela.
Kodwa nokuba kukho into elahlekileyo malunga nokhuselo kusulelo, idosi enye isashukumisela impendulo yomzimba eya kuthi incede ukukhusela isifo esibi.
Ke i-NHS ihamba ngokukhawuleza okungakanani? Ekugqibeleni ifuna ukufikelela kwizigidi ezibini ngeedosi.
Ayizukufezekiswa kule veki- kucingelwa ukuba zizigidi ezimalunga nesithandathu sezitofu zokugonya ezilungele ukusetyenziswa.
Kodwa namhlanje kuphawula ukuqala kwe-NHS ukubeka i-accelerator phantsi.
Ukonyuka okukhawulezayo kwinqanaba lokugonya kufuneka kulandele.
Ngapha koko, umda wokuthintela unokubonelelwa endaweni yesantya apho i-NHS inokugonya khona.
Ngemfuno yehlabathi yezitofu zokugonya, ukuqinisekisa ukuba kukho iidosi ezaneleyo zokulungela ukuya kungangowona mceli mngeni mkhulu.
Iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech laliyi-jab yokuqala evunyiweyo e-UK, kwaye ngaphezulu kwesigidi sabantu babe ne-jab yabo yokuqala.
Umntu wokuqala ukufumana i-jab Nge-8 kaDisemba, uMargaret Keenan, sele enedosi yakhe yesibini.
I-Oxford jab - evunyiweyo ukuba isetyenziswe ngasekupheleni kukaDisemba -Ingagcinwa kubushushu obuqhelekileyo befriji, yenze kube lula ukusasaza kunye nokugcina kunePfizer jab. Kukwabiza kancinci ngedosi.
I-UK ikhusele iidosi ezizizigidi ezili-100 zokugonya iOxford-AstraZeneca, eyoneleyo kuninzi lwabemi.
Abahlali basekhaya abakhathalelayo kunye nabasebenzi, abantu abaneminyaka engaphezulu kwe-80, kunye nabaphambili be-NHS baya kuba ngabokuqala ukuyifumana.
Ii-GPs kunye neenkonzo zokugonya zalapha ekhaya ziye zacelwa ukuba ziqinisekise ukuba wonke umntu okhathalela amakhaya kwingingqi yabo ugonyiwe ukuphela kukaJanuwari, utshilo uDHSC.
Ezinye zeendawo zokugonya ze-730 sele zimiselwe kwi-UK iphela, iseti iyonke yokugqitha i-1,000 kamva kule veki, longeze isebe.